Top 15 Fun Android Games igwu egwu na Enyi
Ị n'anya na-egwu egwuregwu na gị android smart ekwentị? Ọ bụrụ na gị azịza ya bụ kemkwenye, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ ịmara na ugbu a ị nwere ike igwu ndị a ibu adventurous egwuregwu na ndị enyi gị kwa! Na ewu ewu na nke ọtụtụ android egwuregwu, ị nwere ike mfe mpi na ndị enyi gị na-eme ka gị Ịgba Cha Cha ahụmahụ ọbụna ihe kediegwu. Lee ndị top 15 fun ọtụtụ android egwuregwu na ị ga na-agbalị:
Ọ bụrụ na ị na-ama na-akwado nke Asphalt 8, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ ịmara na ị nwere ike igwu a adventurous egwuregwu ọbụna na ndị enyi gị. Niile ị chọrọ bụ a LAN njikọ na i nwere ike tinye ihe dị ka 8 emegide.
2. Okwu Chums
Ọ bụrụ na ị na-amasị-akpọ okwu egwuregwu, mgbe ahụ, okwu chums bụ ezi mmasi maka gị! Na ezi ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda, ihe okwu chums enye ya Player na ọtụtụ nhọrọ ebe ị pụrụ mpi na gị onwe gị na ndị enyi. Ị nwere ike igwu egwu na atọ ma ọ bụ anọ enyi na ọbụna na ndị ala ọzọ.
3. Real Nkata
Egwuregwu na-elekwasị anya basketball hụrụ na Fans. Nke a bụ egwuregwu n'etiti ndị kasị mma basketball egwuregwu ke play ụlọ ahịa na ya ugbu a na-enye gị na ihe owuwu na-egwu na ọtụtụ mode kwa. Gosi anya gị basketball nkà n'ihu ndị enyi gị site na nke a egwuregwu.
Ihe kacha ụgbọala racing egwuregwu site Game ime ulo, gt Racing 2 bụ ezigbo ụgbọala racing adventurous egwuregwu. Na kediegwu 3D ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda, gt Racing 2 bụ onye nke kasị mma ụgbọ ala racing egwuregwu ke ahịa. Ọ na-enye dị iche iche nke customization na ọtụtụ nkwado nke na-eme egwuregwu ọbụna ihe ọzọ na-akpali.
The ise ntọhapụ nke ndị a ma ama RPG usoro site Game ime ulo, Dungeon Hunter 5 bụ ihe ọ bụla ma ihe mma nke ya gara aga nsụgharị na ole na ole ọzọ atụmatụ. Egwuregwu na-agụnye a dị ike ibé na ngwá agha na dungeons-eme egwuregwu ọbụna ihe kediegwu.
Blitz Brigade bụ a na-ewu ewu N'ọgbụgba égbè egwuregwu ebe ị nwere na-ewu gị onwe gị brigeedi maka na-awakpo ndị e wusiri ike. Ị pụrụ ime ka a brigeedi nke ruo 12 egwuregwu na egwuregwu a.
7. égbè Uru Multiplayer
Na ihe ịtụnanya ọrụ interface, égbè Uru bụ kacha N'ọgbụgba égbè egwuregwu. Na ọtụtụ ngwá agha na magburu onwe-emeputa, ị nwekwara ike ịgbakwunye ndị enyi gị gị egwuregwu.
8. Re-volt 2: Multi ọkpụkpọ
Re-volt 2 dị nnọọ mfe ụgbọala racing egwuregwu nke ga-eme ka ị na-eri ahụ na oge. The mbụ version nke egwuregwu ka adịghị akwado multi ọkpụkpọ mode ma nke a ọhụrụ ntọhapụ enye gị ohere tinye ndị enyi gị egwuregwu. E nwere ọtụtụ ụgbọala ndị na odide na pụrụ n'ụzọ dị mfe ahaziri na ọkpụkpọ si chọrọ. Ya mere na-enwe a kacha racing egwuregwu na ndị enyi gị enweghị akwụ ụgwọ otu penny.
9. New Words na Enyi
New Words na ndị enyi bụ a mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet egwuregwu mepụtara site Zynga. Egwuregwu dị yiri nnọọ okwu egwuregwu keere na ị na-eji na-egwu na mbadamba. Ihe karịrị iri enyi nwere ike igwu egwuregwu a ọnụ nke na-agbakwụnye na obi ụtọ na fun. I nwekwara ike jikọọ gị ịkparịta ụka n'Ịntanet profaịlụ na egwuregwu na òkù enyi gị ngwa ngwa. Egwuregwu na-enyekwa akparị ụka owuwu otú i nwere ike gụkwara gị mma enyi ọbụna na-egwu egwu.
Ịhụnanya na-akpọ quizzes? QuizUp bụ a pụrụ iche trivia egwuregwu nke bụ ebe obibi na-akparaghị ókè ọtụtụ ajụjụ. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-Ịnọ nkịtị gwụrụ-aza ajụjụ nanị, ị nwekwara ike na-agba ndị enyi gị egwuregwu. Ị nwere ike mpi na ha na-atụgharị nke a dị mfe zaa ajụjụ na egwuregwu ndị ọzọ na-akpali akpali.
11. akpọtụ Égbè Eluigwe 2
Na-akpọtụ Égbè Eluigwe 2 bụ ọzọ racing egwuregwu na magburu onwe atọ akụkụ ndịna. Ị ga-agafe a ọnụ ọgụgụ nke nsogbu mgbe racing na i nwekwara ike na-agba ndị enyi gị mpi na ị. Ị nwere ike ma agbụrụ solo ma ọ bụ mpi na ndị enyi gị.
12. n'akpa uwe Akụkọ Ifo
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya edinam egwuregwu, mgbe ahụ, n'akpa uwe Akụkọ Ifo bụ nke zuru okè ọtụtụ egwuregwu maka gị! Egwuregwu a na mbụ ulo oru maka iPad ma na-edebe ya ewu ewu n'uche, ọ na oru ihe dị iche iche ndị ọzọ na nyiwe gụnyere android. Ibé nke egwuregwu bụ mythical na magburu onwe atọ akụkụ ndịna-emeputa, n'akpa uwe Akụkọ Ifo bụ n'etiti ndị n'elu gosiri edinam egwuregwu n'ihi na android.
13. Nsogbu Of Clans
Nsogbu nke Clans bụ atụmatụ dabeere free egwuregwu n'ihi na android n'elu ikpo okwu. The echiche n'azụ egwuregwu bụ na-agba ọsọ na gị onwe gị obodo na-echebe ya megide ndị iro ya. Egwuregwu dị na ọtụtụ atụmatụ nke pụtara na ị pụrụ ịkpọ ndị enyi gị maka inyere gị na agha.
Nke a bụ egwuregwu e mere karịsịa maka android ngwaọrụ na bụ kpam kpam free nke na-eri. Ọ bụrụ na ị na-ama na-akwado nke na-agba ọsọ egwuregwu, mgbe ahụ, NinJump Dash bụ nke zuru okè oke maka gị.
Ihe emereme dabeere egwuregwu na ibu mara mma mgbaru ọsọ nke na-eweghachi muffin. Egwuregwu a ga-eri gị $0.99 na ị nwere ike mgbe niile na-agba ndị enyi gị na-enyere gị aka na-emecha na-ozi.
> Resource> emulator> Top 15 fun android egwuregwu na-egwu na enyi